နှစ်ကူး: May 2007
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က၊ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က နဲ့ ပြန်ပြန်ပြောနေရတာ များနေပြီ။ တစ်ပတ် တစ်ပတ်ကို ပုံမှန် post မတင်ဖြစ်ဖူး…။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် နှစ်ကူးတစ်ယောက်တော့ Blog အကြွေးတွေ များနေတယ်ဆိုတာ မမေးဘဲနဲ့ကို သိနိုင်တယ်နော်.. :P များနေပေမယ့်လည်း ကြိုးစားပြီး ရေးဦးမှာပဲ။ သင်လာခဲ့ရတဲ့ သင်ခန်းစာလေးတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်စဉ်းစားပြီး MS Word ထဲမှာ တစ်ကြောင်းရေးလိုက် Save လုပ်လိုက်နဲ့ ရေးထားတာ။ မီးပျက်သွားရင် အားလုံးပါသွားရော။ နောက်ပြီး အားလုံးရေးလို့ ပြီးစီးသွားတော့ Post တင်မယ်လဲ လုပ်ရော Connection ကဘာ Site မှကို ဖွင့်မရတဲ့ ဒုက္ခနဲ့ တိုးပြန်ရော။ ဟော…. အဲဒီလို ဒုက္ခတွေနဲ့ ကင်းသွားတော့မှ ဒီလို…ဒီလို.. Post လေးတွေထွက်လာတော့တာပေါ့။ ယုံလားတော့သိဖူး။ ကိုယ်တွေ့ ကြုံဖူးတဲ့သူတော့ ယုံမှာပါနှော့်။:P
ဒီတစ်ခေါက်တော့ လူပုံရေးနည်းကို စပြီးသင်တယ်။ Form ချပုံချနည်းကတော့ ပုံမှာပြထားသလိုမျိုးပဲ
၁။ စတုရန်းကွက်တစ်ကွက်ကို အလျားလိုက် ၃ ပိုင်းပိုင်း ၊ ဒေါင်လိုက်ကို တစ်ဝက်ဝက်။
၂။ မျက်နှာပုံဆွဲရန်အတွက် ဘဲဥပုံသဏ္ဍာန် စက်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းဆွဲပါ။
၃။ ဒေါင်လိုက် ၃ ပိုင်းပိုင်းထားတဲ့ ထဲက အလယ်ပိုင်းကို နားရွက်အတွက် နေရာယူလိုက်ပါ။
၄။ အလျားလိုက် နံပတ် ၁ လိုင်းကို မျက်ခုံးမွှေး အတွက်ခဲရာယူလိုက်ပါ။
၅။ အလျားလိုက် နံပတ် ၂ နှင့် ဒေါင်လိုက် နံပတ် ၁ ဆုံရာနေရာမှာ နှာအိုးအတွက် စက်ဝိုင်းလေး ၃ ၀ိုင်း ရာထားလိုက်ပါ။
၆။ မျက်ခုံးမွှေးမှ နှာအိုးအထိ တစ်လျှောက်ဆွဲပြီး နှာတံကို လိုအပ်သလိုဖော်ပါ။
၇။ မျက်လုံးနှစ်ဘက်ကို ပုံဖော်လိုက်ပါ။
၈။ ပြီးလျှင် ပါးစပ် အတွက် အလျားလိုက် လိုင်းနံပတ် ၂ နှင့် ၃ ကို ၃ ပိုင်းထက်ပိုင်းလိုက်ပါ။ အဲဒီအခါ ပါးစပ်အတွက် အလယ်ပိုင်းကို ခဲရာပေးလိုက်ပါ။
၉။ နှာခေါင်း နှင့် ပါးစပ် ကြားတွင် နှုတ်ခမ်းအတွက် လိုင်းအရာလေးကို ခဲရာထက်ပေးပါ။
မျက်နှာမှာ တွေ့ရတဲ့ စက်ဝိုင်းအဖြူရောင် ၃ ခုက ဖိုးဝရုပ်လို ပါးကွက်ကွက်ထားခြင်း မဟုတ်ပါဖူး။ အလင်းတိုက်ရိုက် ကျရောက်နိုင်သောနေရာကို ယေဘူယျ ၀ိုင်းပြထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ဒါလေးတွေကတော့ လူမျက်နှာပုံရဲ့ အကြမ်းဖျင်းသဘော ဆွဲသောနည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ဆွဲထားတဲ့ Tone ခြယ်ထည့်ထားပြီးသား မျက်နှာပုံကို ပြလိုက်ရင် နောက်ဒီ Blog ကို မလာရဲလောက်အောင်ကို ကြောက်သွား နိုင်တာမို့ မပြတော့ဖူးနော်။.. :D
Posted by နှစ်ကူး at 5/31/2007 07:50:00 PM0comments
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ကတည်းက တင်မယ့် post က မတင်ဖြစ်သေးဘဲ အခုမှပဲတင်ဖြစ်တယ်…။ ဟိုအကြောင်းအရာလေးလဲ တင်ချင်…၊ ဒီအကြောင်းအရာလေးလဲ တင်ချင်.. နဲ့ ဟို post လဲ တန်းလန်း ဒီ post ကလဲ တန်းလန်း..ဖြစ်ဒါနဲ့ပဲ တော်ပြီ… မဖြစ်ချေဘူး.. တစ်ခုပြီးမှ တစ်ခုလုပ်တာကောင်းပါတယ် ဆိုပြီး စိတ်ကို ဒုန်းဒုန်းချလိုက်တာ်..။ နောက်ပြီး တချို့မြန်မာစာလုံးတွေကိုလည်း ကောင်းကောင်းဖတ်လို့ မရကြဘူးဆိုလို့လဲ အကြံပေးတဲ့ Link လေးတွေဝင်ကြည့်ပြီး တတ်သလောက် မှတ်သလောက် လုပ်ကြည့်နေတာ..။ မလုပ်တတ်တော့ အဆင်မပြေသေးဘူး ဖြစ်နေတယ်..။ မကြာခင်တော့ ရပါလိမ့်မယ်လို့ ထင်ကောင်းပါရဲ့…။ ကြိုးစားကြည့်နေပါတယ်..။ ခဏတော့ သီးခံပေးကြပါအုံးလို့။…
အခုတင်ထားတဲ့ post မှာပါတဲ့ ပုံလေးတွေက Stroke ကိုအဓိကထားပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့ရတဲ့ ပုံလေးပါ။ ဒီလိုလေး လေ့ကျင့်လိုက်ရတော့ Stroke အကြောင်းကို အရင်ကထက်စာရင် နည်းနည်းလေးတော့ ပိုသိလာခဲ့တယ်။ ၀ါရင့် ပန်းချီဆရာကြီးများဟာ Stroke ကိုပိုင်နိုင်ကြတယ်။ Stroke ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဆွဲနိုင်ရင် Texture အလိုလိုကောင်းသွားတယ်..။ Texture ဆိုတာကတော့ ပစ္စည်းရဲ့ အရသာပေါ့ ( ဥပမာ ဆိုကြပါစို့ …. မှန်ကိုဆွဲရင် မှန်ရဲ့သဏ္ဍာန်၊ သံကိုဆွဲရင် သံရဲ့သဏ္ဍာန်၊ ရေကိုဆွဲရင် ရေရဲ့သဏ္ဍာန် ပေါ်လာတယ်..။ ) ပျော့တဲ့ အရာဝတ္ထုကို ဆွဲလိုက်ရင် ပျော့တယ်လို့ ခံစားမိနိုင်သလိုပဲ၊ မာကြောတဲ့ အရာဝတ္ထုကို ဆွဲရင် မာတဲ့ အရသာကို ခံစားမိနိုင်ရမယ်…။ ဒါဟာ Stroke ရဲ့သဘောပဲ။ အခုတင်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို ဆွဲတဲ့နေ့ကပဲ Teacher က ကျောင်းသားတစ်ယောက် ဆွဲထားတဲ့ ကိုယ်တစ်ပိုင်း ပန်းပုပုံ ကိုကြည့်ဆွဲထားတဲ့ လေးထုတ်ပြတယ်..။ ကျောင်းသားဆိုပေမယ့် အသက် ၄၀ ကျော်ဝန်းကျင် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပုံလေးက အပြင်က ပုံတူနဲ့ အရမ်းကို နီးစပ်ပြီး တော်တော်လေးတူပါတယ်။ Teacher ကလည်း မှတ်ချက်ချပါတယ်။ သူဟာ ဘယ်လိုပုံမျိုးကို မဆိုကောင်းကောင်း ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုပဲ ပြင်ဖို့တော့လိုတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ Stroke ပဲတဲ့။ Stroke အားမကောင်းသေးဘူးတဲ့။ ဆွဲထားတဲ့ ပုံမှာ Stroke တွေက မာကြောနေတယ်။ ပန်းပုပုံ မှာရှိတဲ့ မျက်နှာရဲ့ ပျော့ပြောင်းမှု တွေမရှိဘူး။ အဲဒါလေးကို ကြည့်မိလိုက်တော့မှ ခပ်ရေးရေး သဘောပေါက်သွားတယ်။ ( များကြီးသိသေးဖူး….. :P ) သဘောကတော့ Stroke တွေက ကြမ်းနေတော့ သာမန်ဆွဲထားတဲ့ ပုံတစ်ပုံဆိုတာထက် ဘာမှပိုထူးခြားမနေဘူး။ Stroke ကိုဆွဲတဲ့ အခါမှာလည်း အစ၊ အဆုံး ညီညီညာညာလေးဆွဲ သင့်တယ်။ ထိပ်နားမှာ စိပ်နေပြီး အဖျားနားရောက်ရော ကျဲကျဲကြီးဖြစ်သွားတာမျိူးဆိုရင် Stroke တွေက ထိပ်ပိုင်းစုနေပြီး နောက်ပိုင်းကားကားကြီး ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ အဲဒါမျိုးကို ရှောင်သင့်တယ်။ ပြီးတော့လည်း တစ်ကြောင်းနဲ့ တစ်ကြောင်းထပ် မနေစေရဘူး။ အစ အဆုံး တစ်ကြောင်းထဲပဲ။ ( ဒါမျိုးတွေဖြစ်တာ ကိုယ်တွေ့မို့ပါ )။ ဒါမှပဲ ပုံလေးက သပ်ရပ်လှပပြီး ရုပ်လုံးကြွသွားမယ်။ နောက်ပြီး ပုံရဲ့ သဏ္ဍာန်လေးလည်း ပေါ်လာတော့မှာပေါ့။
ဟောဒီပုံလေးတွေက အပြင်ကပုံ ကို Direct ကြည့်ဆွဲထားတာ မှုတ်သေးဖူး… :D ။ ဆွဲပြီးသား Original စာအုပ်ကို ကြည့်ပြီးလေ့ကျင့်ထားတာ..။ ဒါတောင်မှ အမှားတွေက အများကြီးပဲ။ ဒီပုံလေးတွေမှာ အဓိကပေးချင်တာကတော့ အ၀ိုင်းပုံဆိုရင် ဘယ်လို Stroke ဆွဲသင့်တယ် ၊ လေးထောင့်ဆိုရင် ဘယ်လို Stroke မျိုးဆွဲသင့်တယ် ဆိုတာတွေပါပဲ။ များများလေ့ကျင့်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။
စာကြွင်း။ ကျွန်တော်ဟာ ပန်းချီပညာရှင် တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပန်းချီကို စိတ်ဝင်စားပြီး ၀ါသနာပါတဲ့ ၀ါသနာရှင် အဆင့်ပဲရှိပါတယ်။ သင်တန်းမှာ သင်လာခဲ့ရတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုကို အခြားသူတွေကိုလည်း ပြန်မျှပေးချင်လို့ပါ။ ဒီ Blog လေးကို ဖတ်မိပြီး ပန်းချီကို စိတ်မ၀င်စားသေးသူများ စိတ်ဝင်စားလာအောင် ၊ စိတ်ဝင်စားသူများ၊ တတ်ကျွမ်းနားလည် သူများဆီမှလည်း ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်များကိုလည်း နာယူနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေးလဲပါတာပေါ့။ ( အရမ်းသိ.. အရမ်းတတ် နေပါ့လား လို့တော့ ထင်ကြနဲ့ ... နှော့် … ) အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ပေးတဲ့ အတွက် အားလုံး..အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Posted by နှစ်ကူး at 5/28/2007 08:02:00 AM5comments
သိတဲ့ တနယ်ရှင်းတို့ comment ပေးခဲ့ကြနော်.. :P ဟိ...ဟိ...
Posted by နှစ်ကူး at 5/22/2007 09:13:00 PM 11 comments
ကလေးပန်းချီပြပွဲ ဖွင့်ပွဲနေ့ကို လာခဲ့ဖို့ Teacher ကဖိတ်လို့ အရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ပြပွဲက ၇၈ လမ်းပေါ်မှ သင်တန်းတည်ရှိရာ နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ကတည်းက သွားဖို့ဟန်တပြင်ပြင် လုပ်နေပေမယ့်လည်း ညနေ ၄ နာရီ လောက်မှရောက်သွားဖြစ်တယ်။ ရောက်တော့ Teacher ကအပြုံးလေးနဲ့ကြိုပြီး “ အေးအေးဆေးဆေး ကြည့်နော် ” ဆိုပြီး ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဟိုကြည့်ဒီကြည့် နဲ့ မျက်လုံးစင်္ကြာဖြန့် လိုက်တော့တာပေါ့။ ကလေးလေးတွေရဲ့ အားထုတ်ထားတာလေးတွေကို တွေ့ရတော့… သူတို့လေးတွေ သင်တန်းချိန်မှာ တုန်းကတည်းက အပတ်တကုတ်နဲ့ ကြိုးစားရေးဆွဲနေကြတာကို မြင်ရောင်လာတယ်။ တချို့ကားတွေမှာ ဆွဲထားတဲ့ ကိုယ်မရေးတတ်တဲ့ ရေးပုံလေးတွေကိုလည်း မှတ်သားလာခဲ့တယ်။ အပေါ်ထပ်မှာ လည်းပဲ ပန်းချီကားတွေ ခင်းကျင်းပြထားတယ်။ အဲဒီမှာ ဆရာတစ်ယောက်က သူ့တပည့်လေးတွေကို ပန်းချီကားတစ်ကားခြင်းစီရဲ့ အားသာချက်၊ ထူးခြားချက်၊ ရေးပုံ၊ ရေးဟန်၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းလေးတွေနဲ့ သူတို့ပြောပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေက ဘာလဲဆိုတာတွေကို ရှင်းပြနေတာတွေ့တယ်။ အရောင်အသွေး စုံစုံညီညီ ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးလေးတွေနဲ့ လွပ်လပ်စွာ ရေးခြယ်ထားတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ဥာဏ်ရည်လေးတွေကလည်း မခေပါဘူးနော်…။ ကလေးအရွယ်မှာတည်းက အခုလို သင်ကြားခွင့်ရတာ မိဘတွေရဲ့ အမြင်ပြောင်းလဲလာမှုကြောင့် ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ကလေးငယ်လေးတွေဟာ အခုလို ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်တွေ့နေကြအရာတွေကို ပန်းချီအဖြစ်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူး၊ အတွေး နဲ့ အမြင်လေးတွေကို ဖော်ထုတ်ပြခွင့်ရတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းပဲ ပန်းချီကားအဖြစ် ဖောက်ခွဲပစ်နိုင်တယ်..။ အခြားကလေးတွေထက် ဥာဏ်ရည်ပိုင်းမှာ ပိုသွက်လက်ပြီး ထူးခြားတဲ့ အမြင်လည်းရှိကြတယ်။ စိတ်တည်ငြိမ်မှုလည်းရမယ်။ အများနဲ့မတူတဲ့ အမြင်၊ အတွေးမျိုးလဲ ရှိတဲ့အတွက် ပန်းချီအမြင်ရှိတဲ့ ကလေးတွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်ရောက်သွားရင်လည်း တဘက်တလမ်းက အကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်။ အရမ်းကို လေရှည်သွားပီလားသိဖူးနော်… ကဲ..ကဲ.. ပန်းချီကားလေးတွေကို အတူတူလိုက်ခံစားကြည့်ရအောင်…
အဲဒီပန်းချီပြပွဲမှာ သဘောကျခဲ့တဲ့ ပန်းချီကားလေး တွေကိုတွေ့တော့ … blog မှာတင်လိုက်အုံးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးလဲ ပေါ်လာခဲ့တယ်..။ ဒါနဲ့ပဲ တာဝန်ရှိ ဆရာမကို ခွင့်တောင်းပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ယူလာခဲ့တယ်..။ ဆရာမကြီးက ကလေးတွေရဲ့ Biography လေးတွေပါ စိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြပေးခဲ့တော့ အနော်တို့တော့ သဘောတွေ့ မနောခွေ့ပေါ့… ဟာ..ဟ.. ။
My yard လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဖရောင်းနဲ့ဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားလေးကို သဘောကျတယ်။ ဆွဲထားတဲ့ ပညာရှင်လေးကတော့ အသက်က ၁၂ နှစ် VII ကျောင်းသားလေး “ Zaw Phone Pyi ” တဲ့ သူ့ရဲ့အိမ်လေးကို ကြည့်ပြီး outdoor ဆွဲထားတာ။ ကလေးပေမယ့် သစ်ပင်ပုံဆွဲထားတာ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး။ ပြီးစလွယ်လုပ်မထားဖူး။ အရမ်းသဘောကျတယ်..။
နောက်တစ်ပုံကတော “ ပန်းတစ်ပွင့် ” လို့ အမည်ပေးထားတယ်။ သူလေးက အသက် ၁၁ နှစ် ပဲရှိသေးတဲ့ VI ကျောင်းသူလေး “ သီရိမိုးသက် ” တဲ့။ ကျောက်ဆည်ကနေ မန္တလေးထိ လာတက်ရတာ။ ၀ါသနာကြီးသူလေးနော်…။ နံမည်လေးကလှသလို ဆွဲထားတဲ့ ပုံလေးကလည်း ကဗျာဆန်ဆန်ပဲ။ ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကို ရိုးရိုးလေးနဲ့ နွဲ့နွဲ့နှောင်းနှောင်းလေး ဆွဲထားပြီး အရောင်မှာ လက်စွမ်းပြထားတာ။ မထူးခြားပါဖူးလို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမယ့် ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းလေး ကိုတော့ချီးကျူးသင့်တယ်။ ဘာပဲပြောပြော သီရိမိုးသက်လေးရေ.. ဆက်ကြိုးစားထား…။
ဒီပုံလေးက “ Flower Road ” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ သင်္ကြန်ရေပတ်တဲ့ မြင်ကွင်းလေးကို ပြန်လည်သရုပ်ဖော်ထားတာ။ ယခင်မြင်ကွင်းကို ကြည့်ရှုမှတ်သားဖူးပြီး ပြန်ရေးပြထားတာကို ( impression ) ရေးနည်းတဲ့။ ရေးဆွဲတဲ့သူကတော့ အသက် ၁၁ နှစ် အရွယ် VI ကျောင်းသားလေး “ အောင်စစ်ပိုင် ”... ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းထားပုံလေးကို သဘောကျမိလို့ပါ။
ဒီပုံလေးလဲ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် ဘာကိုပြတာပါလိမ့်လို့ ဖြစ်ပေမယ့် … အသေအချာ ကြည့်လိုက်တော့ ခြံဝင်းအပြင်ကနေ အိမ်ကလေးကို ချောင်းကြည့်နေသလား၊ လှမ်းကြည့်နေသလားပဲ။ ဒီကလေးလေး idea မဆိုးဖူးနော်…။ ဆွဲတဲ့သူက ဘယ်သူလဲတော့ မသိခဲ့ဘူး။
ဒီ “ Candle ” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ပုံလေးက ဂီတအခြေခံရှိတဲ့ အသက် ၁၁ နှစ် VI တန်းကျောင်းသားလေး “ အာကာစိုးမိုး ” ရဲ့ စိတ်ကူးပန်းချီလေးပါ။ Teacher ကပြောတယ်.. သူဆွဲတဲ့ ပုံလေးတွေမှာ wave ရဲ့သဘောတရားလေး တွေပါတတ်တယ်တဲ့။ ဒါလေးလည်း မဆိုးဖူးနော်..။
ဒီကားလေးကို “ Step ” လို့ အမည်ပေးထားတယ်။ ဆွဲတဲ့သူလေးက မိန်းကလေး ..။ သူလေးက Catwalk တွေလျှောက်ဖူးတဲ့ Model လေးတဲ့။ အခုသူဆွဲထားတဲ့ ပုံလေးကလည်း စင်မြင့်ပေါ်တက်ခါနီး လှေကားထှစ်လေးတွေကို ဆွဲထားတာ။
ဒီပုံကိုသေချာကြည့်ရင်းနဲ့ တကယ်ကို ပူလောင်လာသလို အရသာကို ခံစားရတယ်။ တော်လိုက်တဲ့ ပန်းချီဆရာလေး…။ ကိုယ်ကလွဲရင် အားလုံးတော်ကြတယ်နော်…။
ပြပွဲကိုလာအားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ် ပုံလေးနဲ့ပဲ… နိဂုံးချုပ်လိုက်ပြီနော်…. အားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ..။
မှတ်ချက်။ ။သြော်…. ဒီပြပွဲလေးက ၇၈ လမ်း ၊၂၇ ၊ ၂၈ ကြား ဘူတာကြီးအနီး ပံသုစန္ဒာပန်းချီသင်တန်း မှာ ၁၅ ရက်နေ့မှ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ပြသထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်…။
Posted by နှစ်ကူး at 5/18/2007 08:30:00 PM4comments
ဟေးးး.... တနယ်ရှင်းဒို့... Chor Tee နော်... ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ်နီးနီးကို အလုပ်ချုပ်ဒါကွဲ့... ဒါကြောင့် ... ပြီးခဲ့တဲ့ စနေ ၊ တနင်္ဂနွေနေ့က Post မတင်ဖြစ်ဖူး။ နောက်ပြီးတော့ စာစီနေရတာလဲ အကြာကြီးပဲ။ ဘယ်ကစလို့ ဘယ်လိုရေးရမှန်းကို စဉ်းစားလို့ မရဘူးဖြစ်နေတာ..။ ၁၀ တန်းတုံးက မြန်မာစာ စာစီစာကုံးကို ၃ မျက်နှာလား၊ ၄ မျက်နှာလားရေးလာခဲ့တာ..။ ဟုတ်လှချည်လားလို့ မထင်လိုက်နဲ့ မြန်မာစာ ဆရာကြီး ဦးမြင့်သိန်း အာဂုံဆောင်ခိုင်းတဲ့ ကဗျာတွေ လက်ရေးကြီးကြီးနဲ့ ချရေးပြီး အဓိပ္ပါယ်နဲနဲပါးပါး ပြန်ပေးလိုက်တော့ ၃ မျက်နှာ၊ ၄ မျက်နှာ အသာလေးပဲနှော့်…
ကဲပါ…။ ထားပါ…။ ဆွဲထားတဲ့ ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး ဝေဖန်ပေးကြပါအုံး။ ကိုယ့်ဘာကိုယ် ဆွဲထားတော့ လှဒယ်ဘဲထင်တာပေါ့…အဟိ…။ Tone တွေခွဲထားတာ အခြေနေ ဘယ်လိုလဲ။ ပန်းချီကားတွေကို ကြည့်ပြီးဆွဲထားတာ။ ဆွဲတဲ့သူရဲ့ အားသန်ရာပေါ်မူတည်ပြီး ပန်းချီကားကို ခံစားရတဲ့ အရသာလည်း ကွဲပြားသွားတယ်။ ဒီပုံခြင်း အတူတူကို ကြည့်ရတာ ခန့်ခန့်ကြီး နဲ့ Calm လည်းဖြစ်တယ်..။ အခုဆွဲထားတဲ့ ပုံတွေကကြတော့ Emotion ဘက်ကိုပါတယ်တဲ့။ သူများဆွဲထားတဲ့ ပုံလေးတွေ အရမ်းသဘောကျပေမယ့် ကိုယ်အားသန်ရာ သန်ရာ ဆွဲတာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်..။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်… သစ်ပင်ပုံတွေမှာ သဘာဝကျကျ မဆွဲတတ်သေးဖူး..။
ဒါ Homework ပေးလိုက်တဲ့ ပုံ...။ ဘာဆွဲရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားလိုက်တော့ ပတ္တမြားစေတီ သွားတုန်းက ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို အပေါ်စီးက ကြည့်ခဲ့တဲ့ မြင်ကွင်းကို သွားသတိရလိုက်လို့ ပြန်ဆွဲထားတာ..။ ကြည့်ခဲ့တုန်းကတော့ လမ်းလေးတွေ၊ ၀င်းနဲ့ ခြံနဲ့ အိမ် တော့ မပါဖူးပေါ့..။ ပုံစံလေးပဲ မှတ်မိပြီး အသေးစိတ် မမှတ်မိတော့ဖူးလို့ ရမ်းတုပ်ပြီး ဖြည့်ထားတာ.. ။ အရင်က မြင်ဖူးပြီးသား မြင်ကွင်းကို ပုံဖော်ပြီး ပြန်ဆွဲတာကို impression လို့ခေါ်ဒယ်ကွယ့် ... ( အဲဒါ ပူပူနွေးနွေး ဒီနေ့ မှသိလာတာ )
ဒီပုံက Horizontal Line စပါးခင်းကြီးတွေရှိတယ် Vertical Line ကတော့ သစ်ပင်ကြီးပဲ။ အလင်းရောင်က ညာဘက် အပေါ်ဒေါင့်မှာကျနေတယ်။ အောက်ကမြေကြီးလိုင်းက ပုံရဲ့ Direction ကို အားဖြည့်ပေးတဲ့ Stroke လိုင်းတွေ။ စပါးခင်းတွေက နောက်ခံ Background သစ်ပင်ကြီးက Background ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ Foreground ရေအိုးလေးလဲ ထပ်ဖြည့်ဆွဲလိုက်တော့ အမြင်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။
ဒါကရော ဘယ်နေရာလဲသိလား..။ မသိလည်းနေ..ပြောပြမယ်..။ ရန်ကင်းတောင် အဝေးကဆွဲထားတဲ့ပုံပါ ။ Teacher ပြောတယ်.. သစ်ပင်တွေဆွဲထားတာ Stroke အားမကောင်းဖူးတဲ့။ မသပ်ရပ်ဖူး ..။ မသပ်ရပ်တော့ မပြီပြင်ဖူး။ မပြီပြင်တော့ မလှဘူးပေါ့..။ ဒါပေမယ့် ကြည့်ရတာတော့ Soft ဖြစ်တယ်တဲ့ ဟုတ်လား.. ? =P တောင်တွေရဲ့ နေရိပ်နေပုံ၊ အနိမ့်၊ အမြင့်... ဒါလေးတွေ သိသာအောင်လုပ်ထားတယ်။ အဲဒါတွေကို ကြိုးစားပြီး ဆွဲထားလို့ နဲ့တူတယ်နော်..။
ဒါက Second Last ပုံ တနင်္ဂနွေနေ့က ဆွဲထားတာ။ ဒါလည်း ရန်ကင်းတောင်ပုံပဲ။ ဟိုပုံ နဲ့ ဒီပုံ ကွာတာက ဒီပုံက နည်းနည်းပိုနီးတယ်..။ ကြုံတုန်းလေး ပြောပြအုံးမယ်..။ နောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ တောင်တန်းကြီးမှာ ... ညာဘက်က တောင်အခုံးကြီးကြီးလေးက နွားလဘို့တောင်..။ သူ့ဒီဘက်ကတောင်က ဘို့လေး။ ဘို့ကြီး၊ ဘို့လေးတဲ့။ မှတ်ထားကြ..။ ရှေ့ဆုံးကတောင်ကတော့ ရန်ကင်းတောင် =P ဒီပုံမှာ HL မျဉ်းတွေများတယ်..။ VL မျဉ်းဆိုလို့ ရန်ကင်းတောင် ရယ် သစ်ပင်သေးသေးလေးတွေရယ်ပဲ။ ဒါပေမယ့် အောက်ဆုံးက မြေကြီးလိုင်းပေါ်လို့ မြင်ကွင်းထဲကို နောက်ထပ် VL မျဉ်းထပ်ဖြည့်ဖို့လိုဖူးတဲ့။ မပေါ်တဲ့သူတွေကြတော့ ထပ်ဖြည့်ရတယ်..။
ဒါက နောက်ဆုံးဆွဲထားတဲ့ပုံ နေ၀င်ရီတရော ကျုံးကြီးကို နောက်ခံထားပြီးဆွဲထားတာ...။ outdoor ထွက်ဆွဲထားတာမှုတ်ဖူး။ US $10000 တန် ပန်းချီကားကို ပြန်ဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားကိုမှ ထပ်ဆင့် ဆွဲထားတဲ့ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ ပန်းချီ... ဟဲ..ဟဲ... outdoor ဆွဲလောက်အောင် အခြေနေကောင်းသေးဖူး...။ သစ်ပင်ပုံတွေဆွဲတာ ကပေါ်ကရော်နဲ့ ...။ သပ်ရပ်သေးဖူး....။
ဒီနေ့တင်ထားတဲ့ ပုံတွေကတော့ Tone တွေကို သီအိုရီ အတိုင်းသွားထားတာ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အရာမဆို စာအုပ်ကြီးအတိုင်းသွားလို့မှ မရတာ..။ ရှာဖွေလေ.. တွေ့ရှိလေ…။
Posted by နှစ်ကူး at 5/14/2007 07:17:00 PM4comments
သူ့နံမည် ဒေါ်ပြား နာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့သူ သူ့ဘ၀မှာ သူနားလည်ထားတာက သူအသက်ရှင်နေသရွေ့ ငွေရှိဖို့၊ ရွှေရှိဖို့က အဓိက။ ရွှေနဲ့ငွေသာရမယ်ဆိုရင် ဒေါ်ပြားတို့က ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရ လုပ်ရဲတယ်..။ အသက်ပင်သေသေ ဆိုတာမျိုး။
ဒေါ်ပြားဘ၀မှာ “ ပေး ” ဆိုတာမရှိဘူး။ အယူချည်းပဲလေ။ ဒါကြောင့် ပေးဆပ်မှုတွေနဲ့မကင်းတဲ့ လင်ယူ/သားမွေးလုပ်ငန်းတောင်မစဉ်းစားဘဲ အပျိုကြီးလုပ်နေတာ။ ယူမယ်ဆိုရင် အုတ်၊ ခဲ၊ သလဲ ကအစ ရွှေ ငွေ အဆုံးယူတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ရပ်ကွက်ထဲမှာ အပေးကမ်းနည်းသူ၊ တွန့်တိုသူ၊ လောဘကြီးသူ ကိုတွေ့ရင် ဒေါ်ပြားနဲ့ နှိုင်းပြီး “ ဒေါ်ပြားနဲ့ အမျိုးတော်တယ်လေ……။” ဟု ပြောစမှတ်တွင်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့တော့ ဒေါ်ပြားတစ်ယောက် ငါးကန်ထဲမှာ ကန်စွန်းရွက်ခူးနေရင်း ရေနစ်ပါလေရော။ ဒေါ်ပြားကရေမကူးတတ်ဘူးလေ။
" ကယ်ကြပါအုံးတော့ " လို့တစ်ချက်သာကျယ်ကျယ်အော်နိုင်ပြီး ရေကန်ထဲမှာ မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက် ဖြစ်နေတယ်။ မြင်တဲ့သူတွေက ကန်ဘောင်ရိုးပေါ်ကနေ သူ့ထက်ငါအော်ပြီး ……
" ဒေါ်ပြား…. ပေး…ပေး… လက်ပေး..လက်ပေး… " လို့ပြောကြပြီး ဒေါ်ပြားရှိရာကို ၀ါးလုံးနဲ့ထိုးပြီး ကမ်းပေမဲ့ ဒေါ်ပြားက လက်မပေးဘူး…။ ဒီတော့မှ လူငယ်တစ်ယောက်က ပြေးလာပြီး -
" ဒေါ်ပြားကို ပေး လို့ပြောလို့မရဘူးဗျ… ။ကျွန်တော့ကိုသာ ၀ါးလုံးပေး…. " လို့ဆိုပြီး..။
" ဒေါ်ပြား.. ယူလိုက်… ယူလိုက်… ၀ါးလုံးလေးကို ယူလိုက်… ရော့ … ရော့… ။ "
ဒီလိုကျယ်ကျယ်အော်ပြီးတော့ ၀ါးလုံးကိုထိုးပေးလိုက်မှ ဒေါ်ပြားက ၀ါးလုံးကို လှမ်းဆွဲလိုက်သကိုး….။ နို့မို့ဆိုရင် အသေပဲ ..။ ဒေါ်ပြားတို့က အဲလို…အဲလို... မှတ်သားလောက်ပါပေတယ်
P.S ဘာ Post တင်ရမလဲစဉ်းစားနေတာ။ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာပါတဲ့ ဒီဟာသလေးကို သဘောကျလို့။ အားလုံးကို ပြန်မျှပေးလိုက်တယ်... ။ ဖတ်ပြီးတဲ့ သူတွေလည်း .. ပြန်ရယ်ကြပေါ့.. ရယ်သောသူ အသက်ရှည်၏...တဲ့..။ ဒေါ်ပြားလိုလူနဲ့တွေ့ရင်လဲ စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ ပစ်မထားနဲ့အုံးနော်... အဟ..ဟ..ဟ
Posted by နှစ်ကူး at 5/10/2007 03:26:00 AM4comments
ဒီနေ့ ကွန်ပျူတာကျောင်းကား ဒိုင်နာတစ်စီး ကျောင်းဆင်းအပြန်လမ်း မြွေဘုရားနားမှာ မှောက်တယ်။ ၂၆ လမ်းမှာလူစုပြီး ၈၂ လမ်းက သွားတဲ့ကျောင်းကား မှောက်သွားတာ။ ဒဏ်ရာရတဲ့သူ အယောက် ၂၀ လောက်ရှိမယ်...။ တွယ်စီးလိုက်လာတဲ့ ယောက်ကျားလေးတွေရော၊ နောက်ပိုင်းနားလေးက မိန်းကလေးတစ်ချို့ရော ကားပေါ်ကနေ လွင့်ထွက်သွားကြတယ်တဲ့။ ၇၂ လမ်းကားသာဆိုရင် အမိုးပေါ်တွယ်စီး တဲ့သူတွေများတယ်.. ။
Posted by နှစ်ကူး at 5/08/2007 10:11:00 AM2comments
မနေ့က သင်လာခဲ့ရတာတွေ ဒီနေ့မှ Post တင်ဖြစ်တယ်။ ဘယ်ကနေစရေးရမယ် ဆိုတာ အတော်ကိုစဉ်းစားယူရတယ်… ( ဥာဏ်ကြီးရှင်လေ )။ အခုတောင်ဒီလောက်မေ့နေမှတော့ နောင်ကျရင် ကိုယ်တင်ထားတဲ့ Post လေးတွေပြန်ဖတ်ပြီး မှတ်မိနိုင်တယ်…ကဲ…ကဲ… လေမပေါတော့ဘူး …. စပြီ..
စနေနေ့ ကသင်ပြီးတဲ့ သင်ခန်းစာလေးတွေ Line , Form , Tone ဆိုတာလေးတွေကို ပြန်နွှေးပြီးတော့ Tone ထဲမှာပါတဲ့ Stroke နဲ့ Texture ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထက်ရှင်းပြတယ။် သူတို့ရဲ့အရေးပါပုံတွေပြောပြတယ် (အလင်းအမှောင်၊ အနိမ့် အမြင့်၊ အနီး အဝေး၊ အဖိ အဖော့ စသည်ဖြင့်ပေါ့ )...။
Tone တွေဆွဲတဲ့ အခါမှာ ပုံစံတူ Tone နှစ်ခု ကိုကပ်လျှက် မဖြည့်ရဘူး။ ကျားကွက်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြည့်ရတယ်…။ Stroke က ပုံရဲ့ Direction ကိုအားဖြည့်ပြီးတော့ Texture ကတော့ ပုံရဲ့ ရုပ်လုံးကြွမှုကို အသက်ဝင်လာစေတယ်။
- ပုံစံတူ ပုံနှစ်ပုံကို Tone ခွဲထားတဲ့ ပုံ မြင်ရတဲ့ အမြင်ခြင်းလည်း ကွဲသွားတယ်... ပထမနေ့ကပြောတဲ့ Interest , Exciting , Emotion ဆိုတဲ့အချက် ၃ ချက်ထဲက တစ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီသွားပြီ...
- ဒီပုံက ကိုယ်ဘာကိုယ် ခွဲထားတာ… Tone 1 to5ကိုစိတ်ကြိုက် သုံးထားတာ (ဟီးးးဟီးးး… Teacher က လှဒယ်တဲ့)
- ဥပမာပေါ့..ညာဘက်က ပုံဆိုရင် Stroke တွေက ပုံကိုအားဖြည့်ပေးထားတာ ၊ နောက်ပြီး Texture တွေကြောင့် တိမ်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို ရုပ်လုံးကြွပြီး ပိုအသက်ဝင်စေတယ်….။
- ဒီအပေါ်ကပုံဆိုရင် အနီးအဝေး၊ အလင်းအမှောင် ကိုပြတယ်..။ အဝေးဆုံးက ( Tone ) အရောင်ကို “Zero” ထားလိုက်ပြီး အနီးဆုံးကို ၅ ထားလိုက်တယ်…( အလင်း အမှောင် Tone ကို အရင် post မှာတင်ထားတယ်။ သုည က နေ ၅ ထိပြထားပေမယ့် ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေပါပဲတဲ့ ) ပထမပုံက Teacher ခြယ်ထားတာ….။ ဒုတိယပုံက ကိုယ့်ဘာကိုယ် ခြယ်ထားတာ။
အဲဒီနောက် ကားဖွဲ့စည်းပုံ ( Composition ) ဆိုတာကိုဆက်တယ်… ပြီးတော့ မော်ဒန်ပန်းချီလို့ခေါ်တဲ့ ပုံတွေ ၊ Landscape ပုံတွေ ၊ ဆွဲပြီးတော့ Stroke နဲ့ Texture ကိုဖြည့်ရတယ်…
စကားချပ် ( ဒီနေ့တော့ Teacher ကချီးကျူးတယ်…။ ပူပူလောင်လောင် ချွေးတစ်ရွှဲရွှဲနဲ့ ၄ နာရီလုံးလုံး ထိုင်ရာကမထ ပုံတွေဆွဲပြီး ဇက်တွေညောင်း၊ မျက်လုံးတွေလေး နေတဲ့ကြားက အဲလိုချီးကျူးသံလေးများ ကြားရပြန်တော့လဲ အားတက်သွားရော။ Teacher ကတစ်ယောက်ချင်းစီကို လိုက်သင်ပြတယ်… လိုအပ်ချက်တွေပြောပြတယ်… စကားပြောရင်လဲ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံး နဲ့ အရမ်းကိုသဘောကောင်းတယ်… သင်တန်းမှာ အများစုက ကလေးတွေချည်းပဲ… အဲဒီမှာ ကလေးဗိုလ်သွားလုပ်တာ )
- ဒီပုံမှာ Subject က Sunflower နေကြာပန်းခင်းကြီးပဲ…
- ဟောဒီပုံလေးမှာ Balance ကိုပြထားတယ် ဒေါင်လိုက်ပုံမှာ Horizontal Line လို့ ခေါ်တဲ့ မြေကြီးမျဉ်း ကိုထပ်ဖြည့်ထားပြီး ၊ Landscape ပုံမှာ Vertical Line တွေ အချိုးညီညီ ထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်တော့ Balance မျှသွားတာပေါ့
ဒါကတော့ ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဆွဲထားတာ... çဲ .... çဲ ... çဲ
ကဲဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပဲ…။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ သင်တန်းလေး ဒီတစ်ပတ်တော့… ပြီးသွားပြီ… နောက်တစ်ပတ်.. ဒီနေရာ .. ဒီ blog လေးမှာ ပြန်ဆုံကြမယ်နှော့်…. အဟ…ဟ…ဟ…
ခုလိုအပြီးထိ သီးခံပြီး ဖတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးကမ္ဘာဆိုင်…
Posted by နှစ်ကူး at 5/07/2007 02:43:00 AM3comments
ဒီနေ့ ( May52007 ) ပန်းချီသင်တန်း တက်မယ့် ပထမဆုံးနေ့။ ပထမဆုံးစတက်ရမယ့်နေ့ဆိုတော့ မနက် ၉ နာရီအမှီ မထနိုင်မှာစိုးလို့ မနေ့ညက ခပ်စောစောလေး အိပ်ရာဝင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ရိုးရာမပျက် နောက်ကျမြဲ ၁၅ မိနစ် နောက်ကျပြီးရောက်သွားတယ်။ ဆရာမကြီးက အရမ်းကိုသဘောကောင်းတယ်…။ ( မဆူလို့ …. အဟ…)
ရောက်ရောက်ချင်းပဲ Line, Form, Tone ဆိုတဲ့အခြေခံတွေ သင်ခန်းစာတွေ စသင်တယ်... ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်းပဲ .. အခြေခံအားဖြင့် မျဉ်းမာ ( Line ) နဲ့ မျဉ်းပျော့ ( Curve ) ဆိုပြီးရှိတယ်… (ရုပ်၊နာမ်) ပေါ့ ။ အဲဒီမှာ ၁၈၀ံမျဉ်းလဲ တစ်ကြောင်း ( မြေကြီးမျဉ်း ၊ Horizontal Line ) ၊ ၉၀ံမျဉ်းမတ် တစ်ကြောင်း (ထောင်မျဉ်း )နဲ့ ယိုင်မျဉ်း ဆိုပြီးတော့ မျဉ်းမာ ၃ မျိုးရှိတယ်။ ဘဲဥပုံ ၊ စက်ဝိုင်းပုံ ၊ အခုံး ၊ အခွက် ၊ လှိုင်းပုံ နဲ့ ခရုပတ်ပုံ စသည်ဖြင့် မျဉ်းပျော့ ကအများကြီး ရှိနိုင်သေးတယ်…။
ပထမဆုံးနေ့ဆိုတော့ အရမ်းကိုတက်တက်ကြွကြွပဲ…။ သင်သမျှအရာအားလုံးက စိတ်ဝင်စားစရာတွေဖြစ်နေတာပေါ့။ မျဉ်းကြောင်းလေးတွေစဆွဲကြည့်ရမယ်လို့ပြောတော့ ဒါလေးများ လွယ်လွယ်လေး ဆိုပြီးဆွဲလိုက်တာ ကောက်ကောက်ကွေးကွေးတွေ ထွက်လာတယ်။ ( “လွယ်မယောင်နဲ့ခက် ၊ တိမ်မယောင်နဲ့နက်” ဆိုတာဒါပဲနေမှာ) ဆရာမကြီးကတော့ “ အရမ်းကြီး အခြေအနေ မဆိုးပါဘူး မျဉ်းမာတယ် ” တဲ့ ( အားပေးစကားတွေ သိတာပေါ့နှော့် )။ ပန်းချီကျောင်းတွေမှာဆို အဲဒီ Line တွေ Curve တွေကို ပထမနှစ် တစ်နှစ်လုံး အသားကျအောင်ထိဆွဲရတယ်တဲ့။ အိမ်မှာအများကြီး လေ့ကျင့်ဖို့ လိုသေးတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လိုက်တယ် ( ချက်ခနဲ့ဆို နားခွက်မီးတောက် ပြီးသား )… ။
ပြီးတော့ မျဉ်းပျော့ အမျိုးမျိုးတွေဆက်ဆွဲရတယ်။ လှိုင်းဆွဲတာ သိပ်မလှဘူးတဲ့ မှတ်ချက်နောက်တစ်ခု ကိုလဲရလိုက်တယ်။ မှတ်ထားရမယ်… ။
Line and Curve တွေချည်းဆွဲပြီးရော Form ( ပုံသဏ္ဍာန် ) အဆင့်ကိုတက်တယ်…
Form is “ Interest ”
Form is “ Exciting ”
Form is “ Emotion ” တဲ့
အဲဒီအချက်တွေနဲ့ ဘောင်ဝင်သွားရင်…… ( ပြောမပြလဲ သိတယ်မလား )
- မျဉ်းမာတွေချည်း ၁၀ ပုံ ၊
- မျဉ်းပျော့တွေချည်း ၁၀ ပုံ ၊
- မျဉ်းမာ နဲ့ မျဉ်းပျော့ ပေါင်းထားတဲ့ ပုံ ၁၀ ပုံ ဆွဲရတယ်…( ဒီဇိုင်း )
ဒါတွေကို အခြေခံခဲရာ ( Out Line ) လို့ခေါ်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ Out Line တွေကို သိပ်သုံးတာမရှိတော့ဘဲ သီအိုရီ အရပဲရှိတော့တယ်… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခြေခံသဘောတရားတော့ သိသင့်ရမယ်… ၀ါသနာပါရင် သူငယ်ချင်းတို့… ဆွဲကြည့်ကြည့်ပါလား… ။ ဘယ်နှစ်ပုံလောက်ထွက်လာမလဲ… စိတ်ကူးကောင်းရင် ခေတ်သစ်မော်ဒန်ပန်းချီ တစ်ချပ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်… ။ အဲဒီမှာလဲ မှတ်ချက်ရသေးတယ်။ Form တစ်ခုထဲမှာ ပုံစံတူတွေထပ်နေတယ်တဲ့…။ ကျန်တဲ့သူတွေ ဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်မသိဘူး…။အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းတာပဲ…။ဆရာမကိုယ်တိုင်ကိုက ချီးကျူးတာ…( အားကျလိုက်တာနော် )
ဒီပုံနှစ်ပုံကတော့ ကိုယ့်ဘာကို ဆွဲတဲ့ မျဉ်းကြောင်း ကောက်ကောက်ကွေးကွေးပုံ နဲ့ တစ်မျိုးကို ၁၀ ပုံစီဆွဲထားတဲ့ပုံလေး နှစ်ပုံ..
နောက်တစ်ဆင့်က နယ်ခွဲခြင်း ( Tone ) အလင်းအမှောင် ၊ အနု ၊ အရင့် သဘောတရားတွေပါတယ်… ၃ ပုံတွဲထဲက အလယ်ကပုံက ရှုပ်ရှက်ခက်နေတယ်လှဘူးတဲ့...။
ဒါက အဒူဆွဲတယ်ထင်လဲ.... ( ဟဲ...ဟဲ... Teacher ဆွဲပေးလိုက်တာ... )
အဓိက ကတော့ idea ကောင်းရမယ်...။ သပ်ရပ်ရမယ်…။ ဒီနေ့ကတော့ ဒီလောက်ပဲ သင်လိုက်ပေမယ့် … လေ့လာရမယ့် အပိုင်းတွေ အများကြီး ၊ လေ့ကျင့်ရမယ့် အပိုင်းတွေလဲအများကြီး …
နေ့လည် ၁ နာရီမှာ သင်တန်းကပြန်လာတယ်… မန္တလေးနွေရာသီရဲ့ နေပူကျဲကျဲ အောက်မှာ ဆိုင်ကယ်မောင်းပြန်လာရတော့ ခေါင်းတွေအရမ်းကိုက်နေတာပဲ။ အိမ်ရောက်ရင်အိပ်ပလိုက်မယ်လို့ အားခဲထားတာ… ဒါပေမယ့်လဲ သင်လာခဲ့ရတာလေးတွေ မေ့တေ့တေ့မဖြစ်ခင် စဉ်းစားပြီး ရောက်ရောက်ချင်း ပဲ Blog အတွက်ချက်ခြင်း ချရေးပြီး စာစီလိုက်တာ…။ စာတွေရိုက်ပြီးလို့ ဓါတ်ပုံထည့်ဖို့ စာရွက်တွေ Scanner သွားဖတ်တော့ Paper Size ကနည်းနည်းကြီးနေလို့…Camera နဲ့ပဲပြန်ရိုက်ထားတာ။ သူငယ်ချင်းတို့… သည်းခံပေးကြနော်… နောက်ပြီး.. အားနည်းချက်တွေ ထောက်ပြ၊မှားနေတာတွေ ပြင်ပေး အကြံပြုချက်တွေလဲ အရမ်းကိုကြိုဆိုပါတယ်… ကျေးဇူးလဲတင်တယ်… ( စာသင်ပျိုနုပဲရှိသေးတော့ … =P )
Posted by နှစ်ကူး at 5/05/2007 11:09:00 AM3comments
Posted by နှစ်ကူး at 5/03/2007 08:32:00 AM 1 comments